Iimveliso zolu ngcelele zonke zinokusebenzisa kunye ne-Y-700, Y-701, Y-702 uthotho lweklasi yePC yokuhambisa ngokuzenzekelayo isilawuli sokutshintsha, ngaphandle kwe-NA, SA, iimveliso zohlobo lwe-LA.
Umyalelo we-2 womlawuli we-ATS, nceda ubone iinkcukacha "I-PC yeklasi yokuhambisa ngokuzenzekelayo isilawuli sokutshintsha".
Uchungechunge lwe-YES1 i-ATSE inamalungu amabini otshintsho. Ukutshintsha kuqhutywa yikhoyili ye-electromagnetic, ke isantya sokudlulisa sikhawuleza kakhulu. Umthombo wamandla wesilawuli uthatha amandla aphambili okanye amandla kaxakeka AC220V njengombane osebenzayo.
I-NA, SA, LA uhlobo lwe-ATSE luhlobo oludibeneyo. Isilawuli sifakwe ngaphakathi kumzimba wotshintsho. Umsebenzisi ufuna kuphela ukudibanisa isekethe ephambili emva koko i-ATSE inokusebenza. Kulula ukuba umsebenzisi aqhagamshele ukubhala. Ngeli xesha, i-SA yohlobo lwe-ATSE enesiginali yokuqalisa komenzi, igalelo lomlilo, impendulo yomlilo, amandla aphambili kunye nesalathiso sokuvala amandla kaxakeka.
N, C, M, Q, S, L luhlobo lokwahlulahlula. Isilawuli sahlulwe ngumzimba wokutshintsha. Umsebenzisi kufuneka aqhagamshele isilawuli kunye nomzimba wotshintsho ziingcingo.
Ukudityaniswa kunye nohlobo lokwahlulahlula i-ATSE zombini ngaphezulu kwamandla ombane, phantsi kwamandla ombane, isigaba esingagqibekanga njl.njl ukubona umsebenzi wokuphosakela kunye nesiqalo sejenreyitha kunye nokumisa umsebenzi wokuphuma kwemiqondiso (Xa iphoso lamandla liphambili, umqondiso uya kuthunyelwa emva kwexesha lokulibaziseka kwe3. , umqondiso uya kumiswa emva kokulibaziseka kwexesha le-3s).
Uhlobo lwe-NA lokuDlulisa ngokuzenzekelayo ukuTshintsha iZikhundla ezibini kunye noDidi oluHlangeneyo
Uhlobo lwe-N lokuDlulisa ngokuZenzekelayo ngokuTshintsha iZikhundla ezibini kunye nohlobo lokwahlulahlula
Uhlobo lwe-NA / N / C lokuGqithisela ngokuzenzekelayo Ukutshintsha iiNdawo ezimbini
M Uhlobo lokuTshintshela oluzenzekelayo Guqula iiNdawo ezimbini
Uhlobo lwe-Q lokuDlulisa ngokuzenzekelayo ukuTshintsha iiNdawo ezibini kunye nohlobo lokwahlulahlula
I-SA / S / LA / L yohlobo oluzenzekelayo lokuTshintshela iiNdawo ezintathu
Uhlobo lwe-G lokuGqithisela ngokuzenzekelayo ukuTshintsha iiNdawo eziNtathu
I-ATS (Umlawuli we-PC ATS)
Udidi lwePC Udidi lweATS
Utshintsho oluzenzekelayo lokuTshintshela utshintsho, luyinxalenye ye2PCs 3P okanye 4P isekethe encinci yesekethe, umatshini wokuhambisa umatshini, umlawuli, njl, inqaku liya kuba ngolu hlobo lulandelayo:
1.Small ngokomthamo, elula kumgaqo-siseko; kukho ukubonelela nge-3P, 4P. Kulula ukusebenza kwaye kudala ukusebenzisa.
Ukutshintshela ukuqhuba ukuqhuba ngemoto enye, egudileyo, akukho ngxolo, ifuthe lincinci.
3.Ukungenelela komatshini kunye nokudibana kombane, utshintsho ngaphezulu kokuthembeka, kunokubonelelwa ngokusebenza ngesandla okanye ngokuzenzekelayo.
4.Ukuba nesekethe emfutshane, ukukhusela umthwalo ongaphezulu kunye nombane ongaphezulu, phantsi kombane, umsebenzi wenqanaba lokulahleka kunye nomsebenzi wealam okrelekrele.
5.Iiparitha zokutshintsha ngokuzenzekelayo zinokukhululeka ngaphandle.
I-6.With interface yomnatha wekhompyuter yolawulo olukude, uhlengahlengiso olukude kunye nonxibelelwano olukude, ukubona kude kunye neminye imisebenzi yokulawula emine njalo njalo.
Ubushushu bomoya obungu-5 ℃ ukuya ku-40 ℃, kwaye ngeyure ezingama-24 iqondo lobushushu alidluli kuma-35 ℃.
2.Ukufakwa kwendawo engekho ngaphezulu kweemitha ezingama-2000.
Ubushushu obuphezulu be-40 ℃, ukufuma komoya okuhambelana nomoya akukho ngaphezulu kwe-50%, kubushushu obuphantsi kunokuvunyelwa ukuba kube nokufuma okuphezulu, okunje nge-20 ℃ kwi-90%. amanyathelo akhethekileyo kufuneka athathwe ngenxa yokuncipha maxa wambi ngenxa yotshintsho lobushushu.
Inqanaba lokungcoliseka komoya: ibanga Ⅲ
Udidi lokufakwa: Ⅲ.
6.Imigca emibini yamandla eqhagamshelwe kwicala elingaphezulu lokutshintsha, kwaye umgca womthwalo uqhagamshelwe kwicala elingezantsi.
7.Ukufakwa kofakelo akufuneki kubenentshukumo ebalulekileyo, ifuthe.
X / Y Uhlobo lokuTshintshela ngokuzenzekelayo
N Uhlobo lokuTshintshela ngokuzenzekelayo
M / M1 Uhlobo lokuTshintshela ngokuzenzekelayo
I-ATS (uMlawuli we-CB)
Umlawuli weCandelo le-ATS ye-CB
YEM3 series ityala oluxonxiweyo yesekethe breaker (apha ekubhekiselwe kuyo yesekethe breaker) lisetyenziswa kwisekethe ye-AC 50/60 HZ, amandla ayo odwa ombane yi-800V, ilinganiswe ukusebenza kombane yi-415V, ukusebenza kwayo okulinganisiweyo kufikelela kuma-800A, isetyenziselwa Ukutshintshwa okungafane kwenzeke kunye nokuqala qho kwemoto (Inm≤400A) .Ikhefu yesekethe inomthwalo ongaphezulu, umsebenzi wesekethe omfutshane kunye nomsebenzi ophantsi wokukhusela amandla ombane ukuze ukhusele isekethe kunye nesixhobo sokuhambisa umbane ekubeni sonakaliswe. amandla okuphula aphezulu, i-arc emfutshane kunye ne-anti-vibration.
Umaphuli wesekethe unokufakwa ngokuthe nkqo okanye ngokuthe tye.
Ubukhulu: <= 2000m.
Ubushushu 2.Environmental: -5, ~ + 40 ℃.
Ukufuma komoya okulinganayo akudluli kwi-50% kubushushu obuphezulu be-40 ℃, ukufuma okuphezulu okunxulumene nokuvunyelwa kungavunyelwa kubushushu obusezantsi, umzekelo, 90% nge-20 S. Umahluko kubushushu.
Udidi lwe-5: Ukufaka isekethe ephambili, ezinye iisekethe ezincedisayo kunye nolawulo.
6.Ikhefu lesekethe lilungele imeko ye-electromagnetic A.
7. Akufuneki kubekho nasiphi na isiqhushumbisi esiyingozi kwaye kungabikho naluphi na uthuli oluqhutywayo, akufuneki kubekho nayiphi na irhasi eya konakalisa isinyithi kwaye ichithe ubushushu.
Indawo leyo ngekhe ihlaselwe yimvula nekhephu.
Imeko yokugcina: ubushushu bomoya ngu -40 ℃ ~ + 70 ℃.
I-YEW1 uthotho lweesekethe yomoya (emva koku ebizwa ngokuba sisaphuli sesekethe) isetyenziswa kwinethiwekhi yokuhambisa kunye ne-AC 50HZ, i-voltage elinganisiweyo ye-690V (okanye ngezantsi), kwaye ikalwe nge-200A-6300A yangoku.
I-YECPS isetyenziswa ikakhulu kwinkqubo yamandla ombane ene-AC 50HZ, i-0.2A ~ 125A- ikaliwe i-voltage ye-400V, ilinganise umbane we-insulation 690V.
YEM3D-250 DC wesekethe breakers zisetyenziswa ikakhulu kwiinkqubo DC kunye ulingano ombane ulinganise ka 1600V, ulinganise ombane yokusebenza ka-DC 1500V nangaphantsi, phezu umthwalo kunye elifutshane wesiphaluka ukhuselo usasazo amandla ulwabiwo kunye neendlela zokukhusela kunye nezixhobo unikezelo lwamandla kwiinkqubo DC kunye rated ngoku 250A nangaphantsi.
I-YEB1-63 iHare ejolise ekunikezeleni ukusika kwamandla okuzenzekelayo phantsi kwemisinga engaphezulu.Bacetyiswa ukuba basebenzise kwiiphaneli zamaqela (indlu kunye nomgangatho) kunye neebhodi zokuhambisa izakhiwo zokuhlala, zasekhaya, zikarhulumente kunye nezakhiwo zolawulo. Izinto ezingama-64 kumjikelo we-8 okalwe ukusuka ku-3 ukuya ku-63A.Le MCB ifunyenwe isiqinisekiso se-ASTA, SEMKO, CB, CE
YGL uthotho umthwalo-bodwa iswitshi isetyenziswa kwisekethe ye-AC 50 HZ, ulinganise i-voltage 400V okanye ngezantsi, kwaye ilinganiswe ngoku kwi-Max 16A ~ 3150A. Isetyenziselwa ukunxibelelana kunye nokwaphula isekethe ngokungasebenzi rhoqo ngesandla. nge-690V isetyenziselwa ukwahlukaniswa kombane kuphela.
1.Altitude engekho ngaphezulu kwe-2000m.
Uluhlu lwe-2 lobushushu obukhoyo luvela kwi-5 ukuya kwi-40 ℃.
Ukufuma Relative hayi ngaphezulu kwe-95%.
Imo engqongileyo ngaphandle kokuqhushumba.
Imo engqongileyo ngaphandle kokuhlaselwa kwemvula okanye ikhephu.
Qaphela: Ukuba imveliso kulindeleke ukuba isetyenziswe kwindawo apho ubushushu bungaphezulu + 40 ℃ okanye ngaphantsi kuka -5 ℃ ukuya ku-40 ℃, ukusetyenziswa kuya kuyixela xa kusenziwa.